Jordania: Fanehoan-kevitra amin’ny fananganana governemanta vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2019 3:17 GMT
AShamlawi nisioka hoe:
Amin'ny anaran'ny orinasa sy ny indostrian'ny TIC (Teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana), arahabaina i @ICTMinJO H.E. Marwan, mirary soa, manohana anao izahay
Niombon-kevitra i Adhametoom:
Arahabaina ny Praiminisitra HE @SamirAlRifai sy HE @nasserjudehand HE @ICTMinJO and HE @WalidMaani . Mirary soa tanteraka #JO #Cabinet
Maya Huneidi nilaza hoe:
Arahabaina i Nesreen Barakat – minisitry ny Fampandrosoana ny seha-panjakana vaovao. Mahatsapa be fanantenana aho mahafantatra fa ao anatin'ny governemanta ny saina mamiratra tahaka azy.
Ny hafa tahaka an'i Farrah Mufleh kosa tsy dia faly loatra:
Lisitra vaovao misy ireo “mini”-sitra…tahaka ny paoma ary zavatra 2 hafa ny maha-paoma ankehitriny
Maro ireo nanontany momba ireo fanendrena manokana, anisan'izany ny fanendrena an'i Sa'ad Hayel Al Srour ho minisitry ny atitany rehefa tsy lany tamin'ny fifidianana tao amin'ny Antenimiera. Naseem Al Tarawnah nilaza hoe:
Resy tamin'ny fifidianana #JOelections i Srour rehefa avy nandany vola be, saingy tsy misy olana, fa notendren'izy ireo ho minisitry ny atitany izy
Farah Madadha niombon-kevitra:
Ahoana ny fandehan-javatra #JO: Lehilahy tsy lany tamin'ny fifidianana parlemantera, voatendry ho minisitra, tsy maintsy matoky ny mety ho fahaiza-manaony ny governemanta
Nanontany fanendrena hafa izy, dia ny minisitry ny fahasalamana teo aloha, Zeid Goussous, voatendry ho minisitry ny fizahan-tany sy ny vakoka:
OK! tsy vitako ny tsy manontany hoe praiministra iza eto an-tany no manendry minisitry ny fahasalamana teo aloha ho lasa minisitry ny fizahan-tany
Nadine Toukan nandefa sioka maromaro manohitra fanovana hafa. Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-tsosialy nampifanarahana ho Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-tsosialy sy ny Raharaham-behivavy. Said Toukan:
Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-tsosialy sy ny Raharaham-behivavy, toerana ho olan'ny vehivavy! Mampalahelo
Toukan nampifandray ny bilaoginy, nanoratra hoe:
Ao anatin'ny ezaka hametrahana ny olan'ny vehivavy ao anatin'ny fandaharanasan'ny governemanta sy milaza izany am-pitokisana, ny fanovana kabinetra (minisitra) vao haingana mampiditra marika ho an'ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-tsosialy, izay lasa Fampandrosoana ara-tsosialy sy raharaham-behivavy. Fihemorana mampalahelo. Mamelona ny olana. Manevateva mivantana ny antsasaky ny mponina ary manevateva tsy mivantana ny atsasany hafa. Fitomboan'ny fiankinan-doha amin'ny toe-tsaina “quota”, na aiza na aiza. Vonona amin'ny fanamafisana ny fitsarana an-tendrony momba ny vehivavy …
Ahoana no ahafahan'ny olona manamarina fa ny lohahevitra maro samihafa momba ny raharaham-behivavy dia azo ampidirina ao amin'ny zoron'ny Ministeran'ny fampandrosoana ara-tsosialy? Midika ve izany fa tsy tafiditra ao anatin'ity minisitera ity ny raharaha momba ny lehilahy? Sa ve takonana ao anatin'ny fampandrosoana ara-tsosialy ihany ny anjara andraikitry ny vehivavy? Tsy misy ve ny raharahan-dehilahy tokony hojerentsika? Inona no famaritana ny raharaham-behivavy? Tsy raharaham-piarahamonina ve ny raharaham-behivavy?
… Mila mandrindra ny rafitra manontolo ao anatin'ny tranobe, arabe, lalantsara, boky sy efijery tsirairay avy isika mba hananganana zava-misy salama eo amin'ny fifandraisan'ny lahy sy vavy. Tsy afaka manao izany amin'ny afisy manambany vehivavy sy manavakavaka ny vehivavy isika izay mamaritra ny antsasaky ny mponina sy mahakasika ny rehetra.